टाउको दुख्नु (दोस्रो भाग) - स्वास्थ्य संसार टाउको दुख्नु (दोस्रो भाग) - स्वास्थ्य संसार
Home > mental health > टाउको दुख्नु (दोस्रो भाग)
basic health health education Khagendra mental health
टाउको दुख्नु (दोस्रो भाग)
अगिल्लो लेखमा उल्लेख गरिएका विभिन्न टाउको दुख्ने बिमारिका अलावा टाउको दुख्ने अरु कारण हुन सक्छन । टाउको दुख्ने बारेमा पुरानो लेख नपढ़नुभएको भए यहाँ क्लिक गर्नुहोस । यो समस्या उत्पन्न गराउने मुख्य मुख्य कारणहरु (अरु रोगहरु) हुन्:
1. रुघाखोकी तथा पिनास
2. गर्धन तथा टाउकाका नशाहरु दबिनु
3. ब्लडप्रेसरको बिमारी
4. मस्तिस्कका बिरामीहरु जस्तै मस्तिस्कज्वोर, पक्षघात, ट्युमर, नसाको बिरामी आदि
5. बिष सेवन
6. कतिपय औसधिहरुका साइड इफेक्ट
7. रक्सिको ह्यांगओभर, धेरै चुरोट पिउनु तथा अरु नशा सेवन
8. शरीरमा पानि, नुनको मात्रा तथा सुगर को मात्रा गडबड हुनु
9. शारीरिक ब्यायाम तथा कसरत धेरै हुनु इत्यादी
माइग्रेन, टेन्सन हेड़ेक तथा क्लस्टर हेड़ेक आफैमा अलग्गै बिमारी हुन् । यिनका कारणको बारेमा जान्नको लागि पुरानो लेख हेर्नुहोला ।
रोकथाम तथा उपचारका उपायहरू
टाउको दुखने समस्याको सही उपचार भनेको यो समस्या पैदा गराउने अन्य कारणको सही निदान एबम उपचार हो । जस्तो की रक्सी, नसा या लागूपदार्थको सेवन नगर्ने; रुघाखोकी बाट बचने , गर्धनको नशा को समस्या भए त्यसको उपचार गर्ने; पानी प्रशस्त पिउने, शरीरमा रगत तथा तागतको कमी हुन नदीने इत्यादि । साथै औषधिको साइड इफेक्टको कारणले टाउको दुखिरहेको हो भने आफ्नो डाक्टरलाइ भेटेर भन्नु राम्रो हुन्छ । डाक्टरले तपाईको औषधि परिवर्तन गर्न या सही तरिकाले सेवन गर्न सिकाउन सक्छन ।
तर धेरैजसो केसमा टाउको दुख्ने समस्याको रोकथाम यस्तो सजिलो हुदैन । किनभने ९०% भन्दै धेरै मानिसमा यो समस्या माइग्रेन वा टेन्सन हेड़ेक वा दुबैको कारणले गर्दा हुन्छ जसको कुनै खास कारण हुदैन । माइग्रेन र टेन्सन हेड़ेक दुवै बाट बच्न अथवा कम दुखदाई बनाउन केहि उपायहरु अबलम्बन गर्न भने अबस्य सकिन्छ । दैनिक जिबनशैली लाइ नियमित गर्ने, पर्याप्त सुत्ने, तनाब कम गर्ने, चिया कफी अत्यधिक पिउने बानि छ भने कम गर्ने, नियमित ब्यायाम गर्ने, आफु र परिवारको लागि समय निकाल्ने कुराहरु उपयोगी हुनसक्छन । माइग्रेनका कतिपय बिरामीलाई खास खानपिन (चोकोलेट, चीज, अचार, अजिनोमोटो, केरा, गहुँका परिकार इत्यादी) तथा आसपासको बातावरण (जस्तोकि भिडभाड, हल्ला हुने ठाउँ) को कारण समस्या बढ्न सक्छ । कतिपयमा मौसमको परिबर्तन को समयमा, महिनावारीको समयमा माइग्रेन ले धेरै दुख दिन्छ । यस्ता खास कुराहरुलाई पहिचान गरेर साबधानी अपनाएमा फाइदा हुनसक्छ ।
माइग्रेन, टेन्सन हेड़ेक तथा अन्य कारणले गर्दा हुने टाउको दुख्ने समस्या सामन्यत पेनकिलरहरु ( सिटामोल, ब्रुफेन आदि) खाएपछि कम हुन्छ । तर यस्ता दबाई डाक्टरको सल्लाह बिना लामो समयसम्म लिनु हुदैन । अधिकांशमा टाउको दुख्नु कुनै गम्भीर बिरामी नभएपनि कुनैबेला टाउको दुख्नु कुनै खतरनाक बिमारिका लक्षण हुन सक्छन ।
तत्काल डाक्टरको सल्लाह लिनुपर्ने मुख्य मुख्य अवस्था हरु हुन् :
पहिलोपटक अचानक तेज टाउको दुख्नु
सहनै नसकिने गरि टाउको दुख्नु
लामो समयसम्म टाउको दुख्नु
साथमा बान्ता आउनु, मुर्छा पर्नु , बेहोश हुनु, गर्धन चलाउन मुस्किल हुनु, ज्वोरो आउनु जस्ता लक्षण हुनु
आँखाको देख्ने शक्तिमा गडबडी हुनु (धमिलो देखिनु, एउटा चीज दुइटा देखिनु )
शरीरको कुनै भागले काम नगर्नु या कमजोर हुनु
अचम्मका हरकतहरु तथा असान्दर्भिक कुराहरु गर्न लागेमा
संक्षेपमा भन्नुपर्दा टाउको दुख्ने समस्या एक आम समस्या हो । विभिन्न साबधानी अपनाएमा यस्तो समस्यालाई कम गर्न सकिन्छ । समस्या धेरै भयो भने अथवा माथि उल्लेख गरिएका जस्ता गम्भीर लक्षण देखिएमा भने तुरुन्त डाक्टरको सल्लाह लिनु बुद्धिमानी हुन्छ ।
grt one dr khagendra
Unknown June 24, 2014 at 7:51 PM
cluster headache ko solution chahiyo will you please explain??
Item Reviewed: टाउको दुख्नु (दोस्रो भाग) Rating:5Reviewed By: Unknown